Ukukhethwa okuhle kakhulu kwamanoveli ayimfihlakalo
Ukubuyekezwa kwenoveli eyimfihlakalo
Ifa lika-Maude Donegal. Indodana Esindile: Amanoveli Amabili Ayimfihlakalo, kaJoyce Carol Oates
Kunababhali abeqa uhlobo abalethwa kulo kunoveli ngayinye entsha. Lokhu kuyindaba ka-Oates futhi kwenzeka ngaleli phakethe logqozi oludabukisayo kodwa lokho kusikisela indlela ephelele yokufa, emizamweni yokuxhumana ngokomoya nalabo ...
Isibonakaliso Sesiphambano nguGlenn Cooper
Kwase kunesikhathi eside ngahlangana nendaba ephathelene nokucwaswa kobuKristu ehlala ikhomba amandla angaphezu kwawemvelo njengenkumbulo ye-atavistic yalabo abakhethwe nguNkulunkulu. Ngakho-ke kufanelekile ukukhomba lesi sakhiwo ukuthi namuhla sithola icala elisha lobungcwele obuthuthukisiwe, lokuzikhethela ...
Izincwadi ezi-3 ezihamba phambili ze- Agatha Christie
Kukhona izingqondo ezinelungelo lokukwazi ukucela iziza eziyinkulungwane nesisodwa ngemfihlakalo yazo ehambisanayo ngaphandle kokuphazanyiswa noma ukuguga. Akunakuphikwa ukukhomba Agatha Christie njengendlovukazi yohlobo lwabaseshi, leyo kamuva eyahlanganiswa yaba amanoveli obugebengu, athokozisayo nokunye. Yena yedwa, futhi ngaphandle kosizo olukhulu lwabo bonke ...
Izincwadi ezi-3 ezihamba phambili zikaCarlos Ruiz Zafón
1964 - 2020 (Sishiye omunye wababhali abathengisa kakhulu. Mhlawumbe umbhali waseSpain ofundwa kabanzi kunazo zonke ngemuva kukaCervantes, mhlawumbe ngemvume kaPérez Reverte) Ukususwa kombhali njengomthengisi othengisa kakhulu emhlabeni akuyona imvamisa yosuku . UCarlos Ruiz Zafón, njengabanye abaningi, ...
Akukaze kwenzeke nguKen Follett
Kubukeka sengathi uKen Follett ngaphambi kwezinganekwane ezinkulu zomlando ubuyile. Futhi lokho kungukubuyela emuva okusibeka kude kuma-90s.Isikhathi esikahle kulabo bethu asebesondele eminyakeni yobudala engacabangi. Futhi yingakho thina esivele sifunde uKen Follet ngaphambili ...
UNkk Merkel. Icala likashansela osethathe umhlalaphansi
Ngeke wazi ngale minyango ejikelezayo kulabo abashiya ipolitiki esebenzayo. ESpain kuyaye kwenzeke ukuthi ababengomongameli bangaphambilini, ongqongqoshe bangaphambili nelinye iqembu labaholi asebethathe umhlalaphansi bagcine sebengena emahhovisi abengalindelekile ezinkampanini ezinkulu. Kepha iGerman yehluke impela. Lapho …
Indlu Yamazwi, nguDonato Carrisi
UDonato Carrisi omdala omuhle usithokozisa njalo ngama-hybrids phakathi kwama-enigmas nobugebengu, uhlobo lohlobo lwemfihlakalo olugcina luphuka njenge-noir egcwele. I-miscegenation ihlala iyimpumelelo lapho kungenzeka ukuhlanganisa okuhle kwengxenye ngayinye. Futhi-ke, njengoba umuntu eshiya ...
Izembatho ezesabekayo, zika-Elia Barceló
Kufanele kube yintokozo enkulu ukukwazi ukukhipha kabusha ngomnyango wangaphambili, ngohlelo oludumile lokuncoma. Futhi u-Elia Barceló ubhekisa kulezi zambatho zakhe ezimbi ukunxenxa ukufunda kwakhe esidlangalaleni, elangazelela iziza ezenziwe eBarceló. Futhi iqiniso ukuthi leli cebo livela kumapharele ukufanisa ...
Ikhasi1 Ikhasi2 ... Ikhasi13 Okulandelayo →